Labada kooxood ee Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa u muuqan kara inay la soo wareegaan daafaca Lyon Joachim Andersen xagaagan 25 jirka ayaa soo jiitay xiisaha ay u qabaan kooxo badan oo Premier League ah ka dib xilli ciyaareed cajiib ah oo amaah ah oo uu la qaatay Fulham Sida laga soo xigtay The Athletic.
Andersen wuxuu ku biiri karaa midkood Tottenham Hotspur ama Arsenal xagaagan Daafaca deenishka ayaa soo jiitay sidoo kale kooxda Manchester United sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu sii joogo kooxda London dhisan ee Fulham.
Wararka Maanta : Wararkii ugu Danbeeyey Dagaalka Jabuuti & Soomaaliya oo Meel Xun Maraya
Joachim Andersen ayaa Fulham kaga soo biiray kooxda Lyon amaah hal xilli ciyaareed ah xagaagii hore Wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii u soo muuqday xilli ciyaareed kale oo liita Premier League kooxda Scott Parker Fulham ayaa u laabatay heerka labaad ee Premier League ka dib markii ay keensadeen kaliya 28 dhibcood, iyagoo ku dhameysteen booska 18aad.
Andersen ayaa lagu wadaa inuu ku laabto Lyon xagaagan laakiin wararka ayaa sheegaya in 25 jirka uu doonayo inuu u dhaqaaqo Premier League Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay u aragto Andersen inuu yahay bedelka suurtagalka ah ee David Luiz.
Wararka Maanta : Madaxweyne Biixi “Soomaali dantooda ayuunba kala soocane cid aanu cadawad u haynaa...
Related Topics:AndersenArsenaldaafacaDagaalamayaanFeaturediyoJoachimLyonqalinka ciyaarahasomaliweyn wararka maantaTottenhamWararka CiyaarahaWararka Maantawararka maanta hiiraan onlinewararka maanta muqdisho 2021
Paris Saint-Germain Oo Isha Ku Heysa Xaalada Ousmane Dembele
Sergio Ramos Oo Qarka U Saaran Inuu Heshiis Hal Sano Ah U Saxiixo Real…
Wararka Maanta : Falanqaynta Kulanka: Celta Vigo Vs Real Madrid ee Horyaalka la liga...
Wararka Maanta : Barcelona Oo Xiisayneyso Daafaca Kooxda Vallencia Jose Gaya.
Wararka Maanta : Mustaqbalka Claudio Ranieri oo ku xirnaan karo 7 xidig oo Ka tirsan Sampdoria.